Meizu M6 Note - အနှစ်ချုပ် - Meizu
မြန်ဆန်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကင်မရာနှစ်လုံးအကြား ကူးပြောင်းရိုက်ကူးနိုင်မှု
Meizu M6 Note သည် ယခင်ကထက် ပိုကောင်းသည်။ အလွန်တရာ မျှော်လင့် စောင့်စားနေကြသော Qualcomm Snapdragon ပရော်ဆက်ဆာတစ်ခု ထည့်သွင်းထားသည့်အပြင် ထူးကဲသော ကင်မရာ တစ်ခုနှင့် ကြီးမား၍ စွမ်းအင်ပြည့်ဝသော ဘတ်ထရီတို့ပါရှိသော M6 Note သည် လူငယ်များအတွက် အရည်အသွေးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိပ္ပာယ် ဖော်ဆိုမှုအသစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
Qualcomm Snapdragon 625 ပရော်ဆက်ဆာ
Meizu M6 Note ကို လုပ်ဆောင်ရည် အမြန်နှုန်း 2.0 GHz ရှိသော Qualcomm Snapdragon 625 octa-core ပရော်ဆက်ဆာဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဆင့်မြင့်မားသော အလွန်တရာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးသည့် 14 nm LPP လုပ်ဆောင်ချက်က M6 Note ၏ ဘတ်ထရီသက်တမ်းကို သာမန်ထက်ပို၍ ကြာရှည်ခံစေသည်။
Meizu M6 Note ၏ ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယခင် မျိုးဆက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး 71% ထိ တိုးမြှင့်ထားသည်။ ၎င်း၏ Adreno 506 GPU ပံ့ပိုးပေးမှုများက အမျိုးအစား စုံလင်သော ဂိမ်းများကို အံ့သြကျေနပ်ဖွယ်ရာ ဂိမ်းကစားနိုင်သည့် အတွေ့အကြုံများ ရရှိစေရန် အသေအချာ ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်ထားသည်။ သင်၏ အကြိုက်ဆုံး ဂိမ်းကို ဖွင့်၍ အရင်ကနှင့် မတူသော ဂိမ်းကစားနိုင်သည့် အတွေ့အကြုံကို ခံစားလိုက်ပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသော အင်တနာ စွမ်းဆောင်ရည်
ပိုမို မြင့်မားသော တည်ငြိမ်စွာ ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့် စွမ်းရည်
ကြိုးမဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်မှုသည် ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံး အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Qualcomm Snapdragon 625 ၏ 4G LTE စွမ်းဆောင်ရည်က Meizu M6 Note ကို လိုင်းဆွဲအား ပိုမို တည်ငြိမ်၍ အနှောင့်အယှက်ကင်းသော အွန်လိုင်း သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ M6 Note ၏ ကြိမ်နှုန်း နှစ်ခုသုံး Wi-Fi က နောက်ဆုံးပေါ် ရုပ်ထွက် အရည်အသွေး မြင့်မားသော ဗီဒီယိုများကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ရန် အပြီးပြည့်စုံဆုံး ပံ့ပိုးပေးသည်။
Arcsoft ကင်မရာ နှစ်ခုသုံးထားပြီး နောက်ခံများကို ဝါး၍ အဓိက ပုံကို ကြည်လင်ပြတ်သားစေသည့် အထူးပြုလုပ်ချက်၊ ပုံများစွာကို ဆက်တိုက်ရိုက်ကူး၍ ဘောင်တစ်ခုဖြင့် ပေါင်းစည်းပေးခြင်းနှင့် HDR
Meizu M6 Note သည် ထူးကဲသော 12-megapixel Sony IMX362/Samsung 2L7 ကင်မရာနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်း၍ စွမ်းဆောင်ရည် သာမန်အဆင့်ရှိသော စမတ်ဖုန်းတစ်ခုတွင် မြင့်မားသော ပုံအရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းသည်။ ရှေ့ကင်မရာသည် 5-megapixel အရည်အသွေးရှိသည်။ Dual PD နှင့် နောက်ခံပုံကို ဝါးစေသည့် အထူးပြုလုပ်ချက် ကဲ့သို့သော အင်္ဂါရပ်များ ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် M6 Note သည် ၎င်း၏ အမျိုးအစားတန်းထဲတွင် မမြင်တွေ့ဖူးသော ကင်မရာ ရိုက်ယူမှု အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ပေးစွမ်းပါသည်။
ƒ/1.9 အလွန်တရာ ကျယ်ဝန်းသော ကင်မရာ အလင်းဝင်ပေါက်
Meizu M6 Note ၏ နောက်ဘက်တွင် ƒ/1.9 အလွန်တရာ ကျယ်ဝန်းသော ကင်မရာ အလင်းဝင်ပေါက်တစ်ခုပါရှိပြီး Sony IMX362/Samsung 2L7 ကင်မရာ နှစ်ခု၊ 1.4μm pixel CMOS ပုံရိပ် အာရုံခံ ကိရိယာနှင့် 6P မှန်ဘီလူးများကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ကင်မရာတွင် တမူဆန်းသစ်သော အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။
0.03 စက္ကန့်တည်းဖြင့် ပုံများကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ချိန်ရွယ်လိုက်ပါ။
စမတ်ဖုန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်း၏ အမျိုးအစားတန်းထဲတွင် SLR ဖိုးကပ်စ်ချိန်သည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားခြင်းမှာ ရှားပါးပါသည်၊ သို့သော် Meizu M6 Note တွင် ထိုကဲ့သို့ ထည့်သွင်းထားသည်။ Dual PD သည် အရာဝတ္ထုကို ဆုံချက်ချိန်ရန် တစ်ချိန်တည်းတွင် မှန်ဘီလူးနှစ်ခုစလုံးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မြန်ဆန်တိကျသော ဆုံချက်ချိန်မှုကို ရရှိစေသည်။ Meizu M6 Note ၏ ဆုံချက်ချိန်မှု အမြန်နှုန်းသည် ယခင် မျိုးဆက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလင်းရောင် ပြည့်ဝသောအချိန်တွင် လေးဆ ပိုမြန်ပြီး အလင်းအားနည်းသော အချိန်တွင် 7.5 ဆ ပိုမြန်သည်။ Dual PD ဖြင့် ဆုံချက်ချိန်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်ကိုပင် ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ရှေ့ကင်မရာကို 16 megapixel အာရုံခံနှင့် ƒ/2.0 ကျယ်ဝန်းသော ကင်မရာ အလင်းဝင်ပေါက်တို့ဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ Arcsoft မှ လှပအောင် ပြုပြင်ခြင်း စနစ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်၊ ထင်ရှားသော မျက်နှာပြင်နှင့် သဘာဝ အသားအရောင်များကို ပေါ်လွင်စေသည်။ ၎င်းအပြင် Flyme တွင် ကင်မရာ စတစ်ကာ ရာပေါင်းများစွာ ပါဝင်သောကြောင့် သင်၏ ဓာတ်ပုံများကို ပို၍ပင် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက် Arcsoft စနစ်
၎င်း၏ အမျိုးအစားတူ အတန်းအစားထဲတွင် မတူညီသော ပုံ အရည်အသွေး
စက်ပစ္စည်းပိုင်းတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပါ။ Meizu M6 Note တွင် ကင်မရာ နှစ်ခုဖြင့် ဆုံချက်ချိန်ထားခြင်း မရှိသော အပိုင်းများကို ပုံထွက် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး အလင်းရောင် မှိန်မှိန်တွင် ပုံများစွာကို ဆက်တိုက်ရိုက်ကူး၍ ဘောင်တစ်ခုဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ဆုံချက်ပြင်ပမှ ပုံရိပ်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ပုံ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို သိသိသာသာ ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသော အထူး Arcsoft စနစ်များ အပြည့်အစုံ ပါဝင်သည်။ M6 Note က သင့်ကို ကုန်ကျစရိတ် နည်းနည်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုံအရည်အသွေးများကို ယူဆောင်လာပေးသည်။
5.5-လက်မ Full HD မျက်နှာပြင်
Meizu M6 Note သည် 5.5-လက်မ Full HD ပြသမှု မျက်နှာပြင် ပါဝင်သည်။ Adreno 506 GPU ၏ အားကောင်းသော လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းရည်များမှ အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် M6 Note သည် ၎င်း၏ ယခင် ကိရိယာများထက် အလွန်တရာ ပိုကောင်းသော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပါသည်။ 1000:1 ပမာဏ အလင်းအမှောင် ပြတ်သားမှု အချိုးက အရာရာတိုင်းကို အထင်ရှားဆုံးဖြစ်စေရန် အာမခံပါသည်။
အလွန်ကြီးမားသည့် 4000 mAh ဘတ်ထရီ
ထိတွေ့မှုနှင့် အထူကို ပြောင်းလဲခြင်း မရှိစေဘဲ Meizu M6 Note တွင် ကြီးမားသော 4000 mAh ဘတ်ထရီကို ပေါ့ပါးသော ကိုယ်ထည်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားကာ သင့်အား အရင်ကထက် ပိုမို ကြာရှည်စွာ ဖုန်းကို အသုံးပြုစေနိုင်ပါသည်။ 18 W စွမ်းအားမြင့် mCharge အင်္ဂါရပ်သည် M6 Note ကို တစ်ခဏအတွင်း အားပြည့်စေသည်။
Full HD ဖြင့် တီဗီ
အရောင် အမှိန် အလင်း နှစ်ခုသုံး
အရောင် အမှိန် အလင်း နှစ်ခုသုံး 4-LED ဖုန်းဓာတ်မီးသည် အဆင်ပြေသော ဖုန်းဓာတ်မီးဖြစ်ရုံသာမက ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးရာတွင်လည်း တောက်ပ၍ သဘာဝ အလင်းရောင်ကို ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ Flyme သည် အခြေအနေတိုင်းအတွက် သင့်တော်သော မီးအလင်းရောင် အထူးပြုလုပ်ချက်5မျိုးကို ပံ့ပိုးထားသည်။
M6 Note • သတ်မှတ်ချက်များ
1. ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပြသ ဖော်ပြထားသော ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်း မော်ဒယ်များ၊ စမ်းသပ်မှု ဒေတာများ၊ လုပ်ဆောင်ချက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် ကိုးကားချက်အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်သည်။ အချက်အလက်အားလုံးသည် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်း လက်စွဲစာအုပ်ကို အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါက၊ ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ဒေတာအားလုံးသည် Meizu သုတေသန ဓါတ်ခွဲခန်းမှ စမ်းသပ်မှု ရလဒ်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဒေတာများသည် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးအောက်တွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အတွက် အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံကို အားကိုးသင့်သည်။
2. SLR ဆုံချက်ချိန်ခြင်း စနစ်သည် Dual PD နှင့် ၎င်း၏ အဆင့်မြှင့်ထားသော SLR နည်းပညာကို ညွှန်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
3. Meizu M6 Note ၏ Arcsoft HDR စနစ် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို နောက်ဆက်တွဲ ဖမ်းဝဲများတွင် ထည့်သွင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
4. "ယခင်ကထက် ပိုကောင်းရမည်" နှင့် "ယခင် မျိုးဆက်" ဟူသော စကားရပ်များသည် Meizu ၏ ကိုယ်ပိုင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ညွှန်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။